Dibedbaxyo looga soo horjeedo diyaaraddii Iran ay soo ridday oo Tehran ka bilowday: SAWIRRO - Calanka.com
Dibedbaxyo looga soo horjeedo diyaaraddii Iran ay soo ridday oo Tehran ka bilowday: SAWIRRO
Ardayda ayaa ku baaqay in caddaaladda la horkeeno dadkii ka dambeeyay soo rididda diyaaradda iyo dadkii qariyayba.
Hal ku dhigyada waxaa ka mid ahaa “madax sare is casil”, iyagoo ula jeeda Hoggaamiyaha Sare ee dalkaas Ali Khamenei, iyo “dhimasho ha u sugnaato beenaalayaasha”.
Dadka isticmaala baraha bulshada ee dalkaas ayaa sidoo kale caro u muujiyay dowladda.
Mid ka mid ah dadkaas ayaa Twitter-ka ku soo qoray: “Weligey ma cafin doono dowladda dalkeyga, dadka meesha joogay ee haddana beenta sheegaya.”
Dibadbaxyada ayaase ah kuwo aan sidaa u sii weyneyn, marka loo eego dibadbaxyadii weynaa ee ka dhacay Iiraan kuwaasoo looga soo horjeeday dilkii Soleimani.
Sidee looga fal-celiyay?
Madaxweyne Trump ayaa qoraal uu ku soo qoray luqadaha English-ka iyo Farsi, ku yiri: “Waxay ku socotaa dadka geesiyaasha ah ee dhibban ee Iiraan: Waan idiin garab taaganahay tan iyo markii aan madaxweyne noqday dowladdeyduna way sii wadi doontaa inay idiin garab istaagto.
“Si dhow ayaan ula soconnaa dibadbaxyadiinna. Geesinimadiinnu waa mid dhiirrigelin ah.”
Xoghayaha Arrimaha Dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo wadaagay muuqaal laga qaaday dibadbaxyada ka socda Iiraan, isagoo yiri: “Codka dadka Iiraan wuu cad yahay. Waxay ka daaleen beenta dowladda, musuqmaasuqa, iyo Ilaalada Kacaanka ee dowladda Khamenei. Waxaanu la jirnaa dadka Iiraan ee u qalma inay helaan mustaqbal wanaagsan.”
Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee UK Dominic Raab ayaa soo saaray warsaxaafadeed ay caro ka muuqato kaddib markii safiirka Britain Rob Macaire la xiray, iyadoo aan wax sharraxaad ah laga bixin.
Mr Macaire ayaa lagu xiray halka uu dibadbaxu ka socday ee bannaanka jaamacadda Amir Kabir, inkastoo markii dambe la sii daayay.